Qarammada Midoobay: Addoonsiga Liibiya waa dambi laga galayo aadanaha – Kasmo Newspaper
Qarammada Midoobay: Addoonsiga Liibiya waa dambi laga galayo aadanaha
Updated - November 22, 2017 6:19 pm GMT
London (kasmo) Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa ku tilmaamay “Dambi lid ku ah aadami-nimada” muuqaallo dhowaan laga sii daayay Tv-ga CNN kuna saabsanaa qaxootiga Libiya oo sidii addoon loo iibinayo.
Guterres oo 20kii Nofember 2017 Xaruntiisa New York kula hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in addoonsigu aanu meel ku lahayn dunida, gaboodfallada la midka ahna dhaawacayaan xuquuqda aadanaha.
Xoghayaha Guud wuxuu sidoo kale ka codsaday mas’uuliinta caalamka in si degdeg ah falkaas loo baaro, si loo maxkamadeeyo ciddii mas’uulka ka ahayd, wuxuuna ku boorriyay dalalka Beesha Caalamka in ay ansixiyaan Heshiiskii Convention against Transitional Organized Crime ee 15kii Nofember 2000 lagu gaaray Golaha loo dhanyahay, isla markaasna dhaqangalay 29kii September 2003.
Ilaa hadda Heshiiskaas waxaa ansixiyay 189 dal oo 184 ka mid ah xubno ka yihiin Qarammada Midoobay, Midowga Yurub, Jasiiradaha Cook, Xarunta Vatican, Jasiiradda Niue iyo falastiin. Dalalka Qarammada Midoobay xubnaha ka ah ee aan wali ansixin waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Suudanta Koofureed.
Talooyinka Xoghayaha Guud waxaa kale oo ka mid ah in dhaqangalinta Heshiiskan iyo afgaradyada (Protocols) ku lifaaqan, sida midka Tahriibka badaha iyo berriga, uu gacan ka gaysanayo ka hortagista addoonsiga.
Isla mar ahaantaas, Ururka Midowga Afrika, wuxuu mas’uuliinta Libiya ka codsaday in lala dagaallamo ganacsiga addoonta Afrikaanka ee Libiya, isaga oo fal ahaanna cambaareeyay.
Hadallada Guterres ayaa ku soo beegmaya maalmo yar ka dib markii wakiilka Sare ee Q.M. dhanka xuquuqda, Zeid Ra’ad Al-Hussein, u jeediyay dhaleecayn Midowga Yurub iyo Italy.
Al-Husseini wuxuu 14kii Nofember 2017 caddeeyay in siyaasadda Midowga Yurub iyo Talyaaniga ee ku taageeraya Ilaalada Xeebaha Libiya, sidii loo horqabatayn lahaa qaxootiga badaha, dibna loogu celin lahaa dal ay dhibaato kala kulmi doonaan, ku tahay xadgudub damiirka aadamiga.